Zoba ipholigoni kunye neebheringi kunye nomgama ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-Microstation -Geofumadas
Dweba i-polygon ngeebherethi kunye nemida ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-Microstation
Ngo-Okthobha, 2011 Ukulanda, Microstation-Bentley, Topography
Kwiminyaka embalwa edlulileyo ndapapasha isihloko esabonisa indlela yokuqulunqa idatha kwi-Excel ukuya ukwakha i-polygonal nge-AutoCAD, ngaphandle kokuyenza yonke inkqubo:
Ngenye imini sasikwikhosi ye-AutoCAD umntu othile wandibuza ukuba kungenziwa na ngomgca wokuyalela iMicrosation. Impendulo ngu-EWE, kufuneka uqonde ukuba i-Microstation's Keyin ayifani nomgca wokuyalela we-AutoCAD. Masibone ukuba ingakhiwa njani, xa sidlula sifunda izinto ezincinci ezisetyenzisiweyo kule nkqubo:
Ibhokisi elisekunene ngumzekelo we-polygonal ngokusekelwe kwimiqondiso kunye nemida.
Nge-Microstation unokwenza oku njengoko ndachaza ngaphambili, ngokungahambi kakuhle-kwaye enye ye-AutoCAD-, ukuba kunzima ukubhalela enye, inokwenzeka yokwenza iimpazamo kwaye ungasayi kubuyiselwa ikhosi yangaphambili.
Ewe, inkqubo yokubambisana iyinto efanayo oko ndichazile nge-AutoCAD, kufuneka uqonde into ethile apho iMicstation ihluke khona.
I-keyin ayakhelwanga ngokusekwe ekwenzeni imiyalelo kwilayini yokubhaliweyo kodwa ngokubiza imiyalelo enolwazelelo lwento, ke ixhasa kuphela oonobumba abangama-56. Ukongeza, ifuna ukuba semicolon (;) isetyenziselwe ukwahlula imiyalelo kuba, ngokungafaniyo ne-AutoCAD, evela kulwazi olusisiseko lwenkqubo, izisa ingqiqo yeClipper ngento eyenziwe yiMicrostation apho kwakusabizwa ngokuba yi-Ustation.
Ngenxa yoku, eyona ndlela ilula kukubiza ii-odolo ezivela kwifayile yokubhaliweyo ngomyalelo @, endicinga ukuba bambalwa kakhulu abawaziyo kodwa yeyiphi inkqubo esoloko isetyenziswa yiMicrostation ukwenza ii-odolo zebatch. Kubandakanywa ukungenisa amanqaku kuluhlu lweetxt ngu mdl owenza oku.
Ukusebenzisa iphepha le-Excel endandisebenza ngalo ukufundisa indlela yokuguqula kwii-bearings kunye nemida ukuya kubumbano, ndiza kubonisa indlela eya kugqithisa ngayo i-Microstation:
Yintoni esiyithandayo ekugqibeleni, ukuba Ngundoqo lokugqibela:
indawo yendawo ;xy =374037.736,1580735.145;
Indawo yendawo yindawo yomyalelo, kubandakanya indawo, i-semicolon kukubonisa enye iodolo, i-xy = ngumyalelo wokufaka izilungelelaniso kwaye ezi zilungelelaniso zimbini ziluhlaza kwaye ziluhlaza ngamanqaku awaziwayo. Ekugqibeleni, semicolon entsha ukubonisa a ukungena okanye isinyathelo somyalelo omtsha.
Ngoko ke, ndicinga ukuba iiseli zomdla wam zikhona kwi-U7 kunye ne-V7 ukuza kubhala ziza kuba:
= QINISEKA («indawo yendawo ; »,xy =«,U7, »,»,V7, »;»
Ngale ndlela, ndikhuphela kuphela okuqulethwe kwikholam ye-AA kwifayile ye-txt, endiya kubiza yona punchpoints2.txt. Ndicebisa ukuba bayifake ngqo kwi-C ke indlela ayinzima kangako.
Kule meko, ndibeka kwiimpepha zam, umendo uza kuba: C: \_ Abasebenzisi \_ Umsebenzisi \_ Amaphepha \_ ama-pf-points2.txt
ukuyifeza, sisebenzela iwindow yomgca womyalelo (ngundoqo), oku kwenziwa Izixhobo> eziphambili kwi uze ufake umyalelo:
@C: \_ Users \_ Umsebenzisi \_ amaxwebhu \_ punchpoints2.txt
Siyangena, kwaye ke unayo, amanqaku athathwe ngokulandelelana kwawo. Kukulungele ukuba nobungqingqwa bomgca obungqindilili ukuze ziboniswe.
Kule nto, ukusebenza kuyafana, umyalelo esimele siwenze umgca wendawoUkongeza, sibonisa ukuba umgca unendawo yokuvela kunye nenqaku lokuya kuyo.
umgca wendawo ;xy =374032.234,1580716.255;xy =374037.736,1580735.145;
= QINISEKA («umgca wendawo ; »,xy =«, U6,», »V6,»; »,»xy =«, U7,», », V7,»; »
Sikopa kwaye sincamathisele kwifayile ye-txt, ugcine kwaye ubaleke kwakhona
Kwaye uncedo olongezelelweyo, kukuba ukwakhiwa kwebhokisi yeebherethi kunye nemida efuna ukwenza ikopi kwi Excel, kunye kudla kwi Microstation. Ngokuncamathisela okhethekileyo unokukhetha phakathi kokuba ngumfanekiso, ispredishithi esishumekiwe okanye esidibeneyo
Ukugqiba eli nqaku, Ndilungiselela umzekelo wefayile kwi-Excel, apho kuphela umxholo wemvelaphi, izikhokelo kunye nemibarho kufuneka ishintshwe kwaye ithemplate inokuba luncedo kuyo nayiphi na iguana engaphezu kwesiqingatha seepondo. Kwakhona apha umzekelo txt.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Microstation V8i -Uyisebenzisa njani ilayisensi
Post Next I-Geomap kunye nekhonkco kunye neemephu zikaGoogleOkulandelayo »
Iimpendulo eziyi-14 "Zoba ipoligoni kunye neebheringi kunye nemgama ukusuka kwi-Excel ukuya kwi-Microstation"
Ndithumele umzekelo wefayile kunye nento ojikeleza kuyo kwisicelo editor@geofumadas.com
I-Kas teie Trimble kunye ne-PowerDrafti ye-veheline expot / yokungenisa kunye ne-koodide mkm programme teete?
Nacho Vergara Galiano uthi:
Akangivumeli ukuba ndiyenze, kwi-Microstation undixelele umyalelo wokungenisa ulwazi
Sawubona! Abahlobo babefuna ukubabuza, ndifuna inkqubo ye-autocad 2015.i-mdt 6 okanye ukuba unako ukuncedisa ukungena kwi-intarlar.grasias.
Isebenza kunye nayiphi na inguqu ye-AutoCAD
Ngaba umntu unokundixelela ukuba ithemplate iphuma ukuthaya iipolgoni nge-autocad, iyahambelana nayo nayiphi na inguqu ye-autocad okanye i-3d yaseburhulumenteni?
Mhlobo othandekayo, ndifumene ifayile endiyicelile, mbulela kakhulu !!
Ku-imeyile yakho, khangela ifolda yogaxekile, ngamanye amaxesha iya khona.
Ukuba unengxaki ukusixelela
I-Messrs ifuna imali ye-Pay Pal kodwa andinakufumana indlela yokundinceda ndikhuphele ifayile ye-Excel ye-microstation
Kukho iindlela ze-lisp ezenza oku ku-AutoCAD.
Ndingayenza njani ukuze ubuncinci ungabakhupheli ngaphandle, uyithumele kum nge-imeyile, kukho abantu abakufumanisa kunzima ukuyifumana ngokuhlawula… .ndiyabulela kakhulu…
Kwiphepha lokukhuphela lewebhu lewebhu kukho iphepha elikuvumela ukuba udwebe amanqaku ukusuka kwiinqununu kwi-Excel
I-CARLOS GOMEZ uthi:
Ncedisa INDLELA YOKUZE UZAZE NGE-CONENADA YECHEKISITHI YOKUGQIBELA YOKUYA KUMGANGATHO WOMMANDLA WOKWENZA I-AUTOCAD MIO NGU2007 NGEXOLO
u victor rivas uthi:
nakwi-autocad ungakwazi kwi-mdl ………… ..